Barta Twitter-ka ee XSHM oo la xannibay!
Written by gobal on 25 January 2013. Boggii Twitter-ka ee Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa saaka si rasmi ah loo xannibay ka dib muddo sanad ah oo bartaas ay ka dhigneyd isha wararka iyo bayaanaadka Afka English-ka ee Mujaahidiinta Soomaaliya.
Ilo wareed masuul ah oo ka tirsan Makatabka Iclaamka ee XSHM ayaa noo xaqiijiyay in la xannibay account-koodii Twitter-ka, waxaana uu sheegay in muddooyinkii u danbeeyay ay jireen cadaadisyo lagu saarayay shirkadda Twitter in ay xirto boggaasi.
Barta Twitter-ka oo ka mid ah hababka cusub ee Warbaahinta casrigan ee loo yaqaano Microblogging ayaa isu keeneysay dhinacyada siyaasadaha kala duwan ee Caalamiga, waxaana Mujaahidiinta Soomaaliya ay u adeegsan jireen bartaasi baahinta bayaanaadka iyo wararka inta badan ku wajahan dawladaha reer galbeedka ee qeybta weyn ku leh dhibaatada dalka Soomaaliya.
Bogga Twitter-ka ee @HSMPress ayaa si rasmi ah loo diiwaan geliyay bishii December ee sanaddii 2011 iyadoona wixii markaasi ka danbeeyay ay ku xirmeen kumanaan dad ah oo ay ku jiraan shirkadaha warbaahinada Caalamiga, wariyeyaasha Caalamiga ah iyo dawladaha qaarkood.
Inkastoo ilaa hadda si rasmi ah aan loo shaacin sababta loo xiray bogga, hadane waxay muujineysaa sida ay reer galbeedku ugu dhib qabeen xaqiiqada jirta oo lagu soo gudbinayo Luqaddooda English-ka oo waliba aad u heer sareysa sida iyagu ay ku qireen warbixinadooda.
Barta Twitter-ka ee @HSMPress ayaa dagaalkeedii ugu horeeyay la gashay dawladda Kenya iyo Afhayeenkoodii fadeexoobaday ee Major Chirchir, iyadoona halkaas ay ka soo hooyeen guul muuqata oo ay gaartay kalimada xaqqa ah ee Xaqiiqada ku dhisan.
Loolankaas ayaa ku soo afjarmay dawladda Faransiiska oo qudheeda marada kaga dhacday weerarkii fashilmay ee horaantii bishan ay ku soo qaadeen degmada Buulamareer, iyadoona dhamaan hadalladii iyo shirarkii saxaafadeed ee ay qabanayeen madaxda dawladdaasi ay meesha ka saareen Tweets kooban oo aan ka badneyn 140 eray oo qura, balse ku dhisnaa xaqiiqada dhulka ka jirta.
ALLAAHU AKBAR ALLAAHU AKBAR ALLAAHU AKBAR WALCIZATULILISLAAM WAACADAHAY ALLAAH INUU GUULEYSANAYO INTA ISUDHIIBTANA WAA KUWA LAHUBO INEEY GUULEEYSANDOONAAN TWITTER MUJAAHIDIINTA LEEYIHIIN FISHA GOORDHAW CAALAMKOO DHANA MUJAAHIDIINTA AYAA MAAMULIDOONA INSHA ALLAHU TWITTER XAGUU JOOGAA GAALKA MUJAAHIDIINTA AY DILIDOONAAN WAXAA LAGA OGAAN GURIGII UU KASOOTAGAY GURIGAAS AYAA TWITTER,BA AH EE BISHAAREEYSTA,,, QATAAR	January 25, 2013
Kooleey wax dhib ah maaha arintaan waa la soo celinkaraa.	January 25, 2013
Guuuuuuuuuuuuuuul mujaaaahidiiiinta Soomaaliya	January 25, 2013